Ngaba Ufanele Uthandaze? Ngaba UThixo Uyayiphendula Imithandazo?
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISepedi ISilozi ISpanish Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAymara IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBicol IsiBulgarian IsiCatalan IsiCebuano IsiChichewa IsiChitonga IsiChitumbuka IsiCibemba IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDangme IsiDanish IsiDatshi IsiEfik IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGa IsiGeorgia IsiGreenland IsiGrike IsiGuarani IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikaonde IsiKikuyu IsiKimbundu IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKisonge IsiKongo IsiKorea IsiKrio IsiLingala IsiLithuania IsiLuganda IsiLuo IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMaltese IsiMaya IsiMoore IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNyaneka IsiNzema IsiOssetia IsiOtetela IsiPangasina IsiPapiamento (saseAruba) IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPhuthukezi IsiPolish IsiPunjabi IsiQuechua (saseBolivia) IsiRashiya IsiRomania IsiSango IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSranantongo IsiSuthu (Lesotho) IsiSwahili IsiSwahili (saseCongo) IsiSwedish IsiTagalog IsiTatar IsiThai IsiTigrinya IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTshiluba IsiTsonga IsiTswana IsiTurkish IsiTuvaluan IsiTwi IsiUkrainian IsiUmbundu IsiUzbek IsiVietnam IsiWayuunaiki IsiXhosa IsiYoruba IsiZande IsiZulu isi-Igbo
Ngaba Ufanele Uthandaze?
Usenokubuza, ‘Ukuba uThixo wazi yonke into, kuquka oko ndikucingayo nendikufunayo, kutheni ndifanele ndithandaze?’ Ngumbuz’ omhle lowo. NoYesu watsho ukuba uThixo “uyakwazi enikusweleyo ningekamceli.” (Mateyu 6:8) UKumkani uDavide wakwaSirayeli wamandulo wayekuqonda oku, waza wabhala wathi: “Akukho lizwi elulwimini lwam, kodwa, khangela! Owu Yehova, sele ukwazi konke.” (INdumiso 139:4) Ngoko ke, kutheni kusafuneka sithandazile kuThixo? Ukuze sifumane impendulo, makhe sihlolisise oko kuthethwa yiBhayibhile ngemithandazo yabakhonzi bakaThixo. *
UMTHANDAZO USISONDEZA KUTHIXO
Nangona iBhayibhile isithi uYehova * uThixo wazi yonk’ into, ikwabonisa nokuba akanamdla ekuqokeleleni nje zonke iinkcukacha ngabakhonzi bakhe. (INdumiso 139:6; Roma 11:33) Inkumbulo yakhe engenasiphelo ayifani nekhompyutha egcina kwaneenkcukacha ezingenamsebenzi. Kunoko, uThixo unomdla kwiingcamango zethu, kuba ufuna sisondele kuye. (INdumiso 139:23, 24; Yakobi 4:8) Kungenxa yoko le nto uYesu wakhuthaza abalandeli bakhe ukuba bathandaze, nangona uYise ekwazi kakuhle oko bakufunayo. (Mateyu 6:6-8) Okukhona sichazela uMdali wethu ngoko sikucingayo, kokukhona siya kusondela kuye.
Maxa wambi, siye singayazi ncam eyona nto simele siyicele emthandazweni. Kwiimeko ezinjalo, uThixo usenokude asebenzise ulwazi lwakhe olugqibeleleyo aze asinike oko sikusweleyo. (Roma 8:26, 27; Efese 3:20) Xa siyibona indlela aye wasinceda ngayo uThixo, kwanokuba ayiqondakali lula, siye sizive sisondele kuye.
NGABA UTHIXO UPHENDULA YONKE IMITHANDAZO?
IBhayibhile iyasiqinisekisa ukuba uThixo uSomandla uyayiphendula imithandazo yabakhonzi bakhe abathembekileyo, kodwa ikwasinika nezizathu zokuba engayiphulaphuli eminye imithandazo. Ngokomzekelo, xa kwakukho ugonyamelo kwaSirayeli, uThixo wayalela umprofeti wakhe uIsaya ukuba athi ebantwini: “Nakubeni nisenza imithandazo emininzi, andiphulaphulanga; zona kanye izandla zenu zizaliswe luphalazo-gazi.” (Isaya 1:15) Kucacile ukuba, abo bangayihoyanga imithetho kaThixo, okanye bangathandazi ngenjongo entle, abanakulindela ukuviwa nguThixo.—IMizekeliso 28:9; Yakobi 4:3.
Kwelinye icala, iBhayibhile ithi: “Kungakhathaliseki ukuba yintoni na esiyicelayo ngokuvumelana nokuthanda kwakhe, uyasiva.” (1 Yohane 5:14) Noko ke, ngaba oko kuthetha ukuba ngokuzenzekelayo uThixo uya kubanika nantoni na abayicelayo abakhonzi bakhe? Akunjalo. Khawucinge ngemeko kampostile uPawulos, owathandaza kathathu ecela uThixo ukuba asuse “iliva enyameni” yakhe. (2 Korinte 12:7, 8) Kusenokwenzeka ukuba uPawulos wayenesifo esinganyangekiyo emehlweni. Kumele ukuba kwakumkhathaza gqitha oko! UPawulos wayenikwe isipho sokuphilisa yaye wade wavusa nomntu ofileyo, kodwa wayengakwazi ukuphilisa esakhe isifo. (IZenzo 19:11, 12; 20:9, 10) Nangona umthandazo kaPawulos ungazange uphendulwe ngendlela awayefuna ngayo, walwamkela ngezandl’ ezishushu uncedo lukaThixo.—2 Korinte 12:9, 10.
Iyinyaniso into yokuba, imithandazo yabanye abantu ekuthethwe ngabo eBhayibhileni iye yaphendulwa ngendlela emangalisayo. (2 Kumkani 20:1-7) Kodwa oko kwakungafane kwenzeke. Abanye abakhonzi bakaThixo babesiba buhlungu xa bebona ngathi ayiphendulwa imithandazo yabo. Ngokomzekelo, uKumkani uDavide wabuza wathi: “Koda kube nini na undilibala, Yehova? Ngonaphakade na?” (INdumiso 13:1) Kodwa xa uDavide wayiqondayo into yokuba kukaninzi uYehova emkhusela, oko kwamenza wamthemba ngakumbi. Kwakuwo loo mthandazo, uDavide wongezelela wathi: “Ke mna, ndikholose ngobubele bakho bothando.” (INdumiso 13:5) Kanye njengoDavide, abakhonzi bakaThixo namhlanje kusenokufuneka bazingise emthandazweni de abaphendule.—Roma 12:12.
IINDLELA UTHIXO AYIPHENDULA NGAZO IMITHANDAZO
UThixo usinika oko sikuswele ngokwenene.
Ngokufanelekileyo, abazali abanenyameko abasoloko bebanika abantwana babo oko bakufunayo ngexesha abakufuna ngalo. Ngokufanayo, noThixo usenokungasiniki oko sikucelayo ngendlela ebesicinga ngayo okanye ngexesha ebesikulindele ngalo. Kodwa njengoko ebeya kwenza uyise onothando, sinokuqiniseka ukuba naye uMdali wethu uya kusinika oko sikuswele ngokwenene ngexesha elifanelekileyo nangendlela efanelekileyo.—Luka 11:11-13.
UThixo usenokuyiphendula imithandazo yethu ngeLizwi lakhe iBhayibhile
UThixo usenokungaphenduli ngendlela ecacileyo.
Kuthekani ukuba sithandazela ukufumana isiqabu kwingxaki engapheliyo? Ngaba sifanele sigqibe kwelokuba uYehova akasiphendulanga, kuba nje engakhange ayisuse loo ngxaki? Akunjalo. Kusenokwenzeka ukuba uThixo uye waphendula ngendlela engabonakali ngokucacileyo kuwe. Ngokomzekelo, usenokuba uye wancedwa ngumhlobo onenkathalo kanye ngexesha elifanelekileyo. (IMizekeliso 17:17) Akungebi mhlawumbi loo mhlobo uthunyelwe nguYehova? Kwakhona, uThixo usenokuyiphendula imithandazo yethu ngeLizwi lakhe iBhayibhile. Kuyo sisenokufumana ubulumko obunokusinceda sicombulule ingxaki esijamelene nayo.—2 Timoti 3:16, 17.
UThixo usenokusebenzisa abahlobo abanenyameko ukuba basincede ngexesha elifanelekileyo
Endaweni yokuba ayisuse ingxaki, uThixo udla ngokunika abantu bakhe amandla abawadingayo ukuze bamelane nayo. (2 Korinte 4:7) Ngokomzekelo, xa uYesu wacela uYise ukuba asuse ingxaki awayejamelene nayo, esoyikela ukuba iza kuzisa ugculelo egameni likaThixo, uYehova wathumela ingelosi ukuba imomeleze. (Luka 22:42, 43) Ngokufanayo, uThixo usenokusebenzisa umhlobo osondeleyo kuthi ukuze asikhuthaze. (IMizekeliso 12:25) Le yenye yeendlela ezingabonakali ngokucacileyo uThixo asenokuyiphendula ngazo imithandazo yethu.
Kusenokufuneka silinde de kube lixesha elifanelekileyo.
IBhayibhile ithi uThixo uSomandla ubenzela inceba abathobekileyo “ngexesha elililo.” (1 Petros 5:6) Ngoko ukuba ubonakala ngathi uphendula kade, oko makungasenzi sigqibe ekubeni akakhathali. Kunoko, ngenxa yolwazi lwakhe oluphangaleleyo, uMdali wethu onenyameko usenokulinda de kube lixesha elifanelekileyo ngaphambi kokuba aphendule imithandazo yethu.
“Zithobeni, ke ngoko, phantsi kwesandla esinamandla sikaThixo, ukuze aniphakamise ngexesha elililo.”—1 Petros 5:6
Masikuzekelise ngolu hlobo oku: Masithi unonyana oselula ocela ukuba umthengele ibhayisekile. Ngaba uza kusuka umthengele ngokuzenzekelayo? Ukuba uvakalelwa kukuba usemncinane kakhulu ukuba angaqhuba ibhayisekile, usenokugqiba ekubeni ukhe ulinde okwethutyana. Kodwa ekuhambeni kwexesha, usenokude umthengele ibhayisekile leyo xa kufanelekile. Ngokufanayo, uThixo usenokusinika “izicelo zentliziyo [yethu]” ngexesha elifanelekileyo ukuba siqhubeka sithandaza.—INdumiso 37:4.
QINISEKA UKUBA UYEHOVA UYAYIPHULAPHULA IMITHANDAZO
IBhayibhile ibongoza amaKristu okwenyaniso ukuba angakuthathi lula ukubaluleka komthandazo. Abanye basenokuthi, ‘Kulula ukutsho ngomlomo.’ Kuyinyaniso ukuba, xa sijamelene nengxaki engapheliyo, sisenokukufumana kunzima ukulindela impendulo kaThixo. Kodwa masikhumbule oko wakuthethayo uYesu ngokuzingisa emthandazweni.
UYesu wenza umzekeliso womhlolokazi olihlwempu owaqhubeka esiya kumgwebi ongenanceba ecela ukuba enzelwe okusesikweni. (Luka 18:1-3) Nangona ekuqaleni lo mgwebi engazange avume ukumnceda, wathi kuye ekugqibeleni: “Ndiza kuqinisekisa ukuba okusesikweni kuyaphunyezwa khon’ ukuze angahlali esiza aze andiqobe andigqibe.” (Luka 18:4, 5) Ngokutsho kombhalo wolwimi lwantlandlolo, lo mgwebi wamnceda lo mhlolokazi ukuze “angambethi ngaphantsi kweliso,” okuthetha ukuthi, “amenze adume kakubi.” * Ukuba nkqu nomgwebi ongenanceba uyakwazi ukunceda umhlolokazi, ngenxa yokoyikela ukuduma kakubi, kubeke phi ke kuThixo wethu onenyameko ukubenzela okusesikweni abo ‘badanduluka kuye imini nobusuku’! Njengoko uYesu watshoyo, uThixo “uya kubangela ukuba okusesikweni kwenziwe kubo ngokukhawuleza.”—Luka 18:6-8.
“Qhubekani nicela, niya kunikwa.”—Luka 11:9
Nangona maxa wambi sisenokuba madolw’ anzima ukuthandazela uncedo, asimele sityhafe. Ukuqhubeka kwethu sithandaza, kubonisa indlela esilufuna ngokunyaniseke ngayo uncedo lukaThixo. Kukwasinika nethuba lokubona iindlela uThixo ayiphendula ngazo imithandazo yethu, nto leyo esenza sisondele kuye. Ewe, sinokuqiniseka ukuba uYehova uya kuyiphendula imithandazo yethu evisisana nokuthanda kwakhe, ukuba sinokholo lokuba uya kusinika oko sikucelayo.—Luka 11:9.
^ isiqe. 3 Ukuba sifuna uThixo ayiphendule imithandazo yethu, simele sizimisele ngokunyanisekileyo ukuthobela imithetho yakhe. Ukuba senjenjalo, sisenokuwabona amandla omthandazo, njengoko echazwa kweli nqaku. Ukuze ufumane inkcazelo engakumbi, funda isahluko 17 sencwadi ethi Yintoni Ngokwenene Efundiswa YiBhayibhile? epapashwe ngamaNgqina kaYehova, okanye uye kwi-www.jw.org/xh.
^ isiqe. 5 UYehova ligama likaThixo elichazwe eBhayibhileni.
^ isiqe. 22 Ngamaxesha okubhalwa kweBhayibhile, uThixo wayelindele ukuba abagwebi bakwaSirayeli babanyamekele abahlolokazi kunye neenkedama.—Duteronomi 1:16, 17; 24:17; INdumiso 68:5.